Fitantanana ny andramena: hiara-midinika ny AVG sy ny minisitera | NewsMada
Fitantanana ny andramena: hiara-midinika ny AVG sy ny minisitera
Anisan’ny nanohitra ny drafitrasa hitantanana ny tahiry andramena giazana naroson’ny fanjakana sady nitaky ny handavan’ny Cites azy ny fikambanana Alliance voahary gasy (AVG). Nanaiky hiara-midinika aminy ny minisitera.
Araka ny efa fantatra, tsy nankatoavin’ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny biby sy ny zavamaniry ahina ho lany tamingana (Cites), ny drafitrasa naroson’ny fitondrana malagasy tany Rosia, tamin’ny fiandohan’ny oktobra teo. Anisan’ny nanao ady sisika, nandresy lahatra tsy hankatoa azy ny Cites ny fikambanana Alliance voahary gasy (AVG) eto Madagasikara sy ny mpiara-miombon’antoka aminy, toy ny Rafitra iraisam-pirenena mikasika ny tontolo iainana (IEA), ohatra. Nilaza ny filohan’ny filankevi-pitantanana (PCA)-n’ny AVG, Razakamanarina Ndranto, omaly, fa “tsy eken’izy ireo ity drafitrasa ity satria tsy ao anatin’ny fotoana tokony hanaovana azy, indrindra ao anatin’ny fotoam-pifidianana isika. Tsikaritra koa fa tsy tanteraka ny fampiharana ny fanjakana tan-dalàna eto amintsika. Na izany aza, mieritreritra ny AVG hiara-midinika amin’ny fanjakana, hikarohana vahaolana miaraka ny hitantanana ireo andramena”.
Fampiofanana ny fiarahamonim-pirenena
Ankoatra izany, nikarakara atrikasa ny AVG sy ny mpiara-miombon’antoka aminy, mampiofana ny fiarahamonim-pirenena (OSC) eto amintsika, mikasika ny lalàna amin’ny tontolo iainana, mandritra ny roa andro. Nambaran’ny PCA-n’ny AVG, fa “tanjona ny hanamafisana ny fahaiza-manaon’ny OSC mikasika ny fihefezana ny lalàna, ary afaka hanao ady sisika, mandroso hevitra hanatsarana izany izy ireo. Olana eto Madagasikara, maro ny lalàna, saingy tsy ampiharina”.
Niara-niombon’antoka tamin’ny AVG nikarakara ity atrikasa ity ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny ala, ny FAO. Anisan’ny mandray anjara ny fikambanana ONG Fanamby, ny Durrell, ny fikambanana Famelona, sy ny hafa.